किन त्यागिन त सनी लियोनले ननभेज ? « Deshko News
किन त्यागिन त सनी लियोनले ननभेज ?
काठमाण्डौ ,कार्तिक ५
प्रोन स्टार एवम भारतकी चर्चित नायिका सनी लोयोन बेला बेला निकै चर्चामा आउँछिन । हुनत कलाकारलाई चर्चामा आउनु सामान्य कुरा भने होइन् ।
कहिले ताततातो हट सिन दिएर चर्चामा आउने सनी बलिउड चलचित्र क्षेत्रकै निकै हट बन्दै आएकी छिन। र उनि दुनियाकै हट र सेक्सी फिगरका निकै धनि मानिन्छिन । यतिखेर उनका फेनहरु ह्वातै बढेका छुन ।
अरुलाई १०४ डिग्रीको तापक्रममा तताउदै आएकी सनी लियोन यतिबेला भने आफै तातेकी छिन। उनले यो आफ्नो तातो पनलाई चिस्याउन ननभेज डिस नै त्याग्ने भएकी छिन। स्वास्थ्यको कारण देखाउदै उनले अब आफु साकाहारी बनेको घोषणा गरेकी छिन। आफ्नो रगत सफा गर्न उनले आफु साकाहारी भएको बताएकी छिन।
आफु बिरामी भएको र रगत सफा गर्न इन्जेक्शन लागाउनु पर्ने अवस्ता आएको उन्ले बताईन । त्यसैले उनको शरीरले निकै तातो महसुस गर्न थालेकी हुन ।
त्यसको लागि उनले अहिले निकै बेस्वादिलो चिया पिउनु परेको खुलासा समेत उन्ले गरेकी छिन । यतिबेला उनले परम्परागत चिनिया अकुपन्चर बिधिद्वारा आफ्नो उपचार गराई रहेकी छिन। उनले भनेकी छिन म यस्तो खालको परम्परागत स्वास्थ्य उपचार विधिमा विश्वास गर्छु ।
उनले थपिन यस समयमा आएर मलाइ साकाहारी हुन् इच्छा गरेर आयो । तेसैले अब अल्कोहल जन्यखाध्य पदार्थ क्याफिन, टक्सिन केहि पनि लिने छैन । उनले फेरी अजय देवगन को ‘बादशाहो’ फिल्ममा एउटा आइटम डान्स गर्ने अफर पाएकी समेत बताएकी छिन।